Android P ကိုဖြန့်ချိသည့်အချိန်ဇယား | Androidsis
Android P ၏ပထမ ဦး ဆုံးအကြိုဗားရှင်းသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်လာသည်။ ဒါကြောင့်ဒီ preview version အသစ်နဲ့ခေတ်သစ်တစ်ခုစတင်ပါပြီ။ သတင်းကိုအာရုံစူးစိုက်ပြီးကတည်းက OS စနစ်၏ဗားရှင်းအသစ်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုစွန့်ခွာသွားသည်။ ယခုအချိန်တွင်စျေးကွက်ရှိဖုန်းအများစုတွင် Android Oreo မရှိသေးပါ။ အခုတော့ Android P ရဲ့ပြက္ခဒိန်ကိုကျွန်တော်တို့သိပြီးသားပါ.
ဒီပြက္ခဒိန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် လာမည့် preview ဗားရှင်းကိုဖြန့်ချိရန်စီစဉ်ထားသည့်အချိန်သို့မဟုတ် Android 9.0 နောက်ဆုံးရောက်ရှိလာမည့်နေ့ရက်များ။ ဤသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုဤဂူဂဲလ်ပြက္ခဒိန်မှသိရှိပြီးဖြစ်သည်။
အမှန်တရားမှာကုမ္ပဏီအနေဖြင့်စွန့်စားမှုအနည်းငယ်သာယူဆောင်လာခြင်းသို့မဟုတ်ဤကိစ်စနှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှုများကိုတင်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ဤ operating system ဗားရှင်းအသစ်သည်ယခင် operating system ဗားရှင်းနှစ်ခုနှင့်တူညီသောလမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အားလုံးသုံးကိစ္စများတွင်အလွန်ဆင်တူရက်စွဲများ။
ဆိုလိုတာက Android P ကိုသြဂုတ်လမှာတရားဝင်တင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ Oreo, Nougat တို့နှင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးသောအရာ ပြက္ခဒိန်တွင်ပြထားသောအရာများသည်၎င်း၏တရားဝင်တင်ဆက်မှုနှင့်ဖြန့်ချိမှုသည်တတိယသုံးလပတ်တွင်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။
ပုံတွင်ပြက္ခဒိန်ကိုတွေ့နိုင်သည်။ ဤသည်များမှာ Android P ၏အဆင့်အမျိုးမျိုး ငါတို့ကိုဒီအချိန်မှာစောင့်နေတယ်၊
ပထမ ဦး ဆုံးအကြိုဗားရှင်း: operating system ၏ကန ဦး ဖြန့်ချိ။ မတ်လ7မှရရှိနိုင်
ဒုတိယအစမ်းကြည့်ခြင်း ၎င်းသည်မေလတွင် Google I / O 2018. တွင်ရောက်ရှိမည်။ ထို့အပြင်ဤဗားရှင်းသည် Android Beta Program မှတစ်ဆင့်ရောက်ရှိမည်။
preview 3- ဇွန်လအစတွင်နောက်ဆုံး API များနှင့် SDK ၏မူကွဲများပါရှိသည်။ developer များသည် version အသစ်အတွက် support နှင့်အတူ Google Play သို့ updates များကို upload ပြုလုပ်နိုင်မည်။
စတုတ္ထကြိုတင်ဖြေ - ဇွန်လအကုန်မှာ bug တွေအတွက်စမ်းသပ်မယ့် version တစ်ခု
ယခင်ပဉ္စမ။ ဇူလိုင်လအကုန်နောက်ဆုံးဗားရှင်းနဲ့တူတယ်။ အနည်းငယ်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများပြုလုပ်လိမ့်မည်
နောက်ဆုံးဗားရှင်း: ယခုနှစ်တတိယသုံးလပတ်တွင် Android 9.0 ရောက်ရှိမည်။ အကယ်စင်စစ်၎င်းသည်ယခင်အခါသမယများကဲ့သို့သြဂုတ်လလယ်တွင်ပေါ်လာလိမ့်မည်။
ဤသည်မှာပြက္ခဒိန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Android P. ရောက်ရှိခြင်းနှင့်အတူယခုနှစ်အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်ပြက္ခဒိန်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » Android ဗားရှင်း » Android P ဖြန့်ချိသည့်အချိန်ဇယားကိုဖော်ပြခဲ့သည်
[APK] Netease 2018 ကို Root မပါပဲဘယ်လို download ဆွဲရမလဲ။ AH နှင့်စပိန်အတွက် !!